Tripadvisor dia nijaly tamin'ny fidiram-bola efa ho iray lavitrisa dolara tamin'ny taona 2020
Home » Travel Technology News » Tripadvisor dia nijaly tamin'ny fidiram-bola efa ho iray lavitrisa dolara tamin'ny taona 2020
Raha ny angom-baovao farany dia niaina fihenan'ny fidiram-bola 61% YoY ny TripAdvisor tamin'ny taona 2020
Ny areti-mifindra COVID-19 dia tsy nitsitsy ny tranonkala fitsangantsanganana sy fizahantany be mpitsidika indrindra eto an-tany
Niaritra fatiantoka goavana i TripAdvisor tamin'ny taona 2020
Nihena be ny isan'ny mpiasan'ny TripAdvisor, herintaona monja taorian'ny fampiasam-bolany ho an'ny mpiasa
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia iray amin'ireo indostria voa mafy indrindra tamin'ny valan'aretina COVID-19 ary tsy afa-bela ny tranokala fitsidihana sy fitsidihana be mpitsidika indrindra eran-tany. TripAdvisor dia iray amin'ireo taona ratsy indrindra ary niaina fidinan'ny fidiram-bola manan-tantara. Raha ny angom-baovao farany dia niaina fihenan'ny fidiram-bola 61% YoY ny TripAdvisor tamin'ny taona 2020, fatiantoka efa ho iray lavitrisa dolara tao anatin'ny herintaona.
Lockdowns Manimba ny fivezivezena eran-tany amin'ny famelezana ny indostrian'ny fizahan-tany
Tamin'ny fanombohan'ny taona 2020 dia nanidy ny sisin-taniny ireo firenena nanodidina ny fikasana hanalefaka ny vokatra efa nandrava ny COVID-19, nanaparitaka ny firongatry ny indostrian'ny fizahantany. TripAdvisor, iray amin'ireo tranokala famandrihana sy tranokala fampiantranoana malaza indrindra manerantany, dia tsy afa-bela tamin'ny vokatry ny areti-mandringana ary niaritra fatiantoka lehibe tamin'ny 2020.
Hatramin'ny 2014, Tripadvisor sy ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny ankapobeny, dia nisondrotra ambony tamin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-bola maro. Io taona io no nanamarihana ny fotoana voalohany nahazoan'ny Tripadvisor fidiram-bola mihoatra ny $ 1B, tarehimarika iray izay tsy nidina ambany raha tsy ny zava-nitranga tamin'ny taona 2020. Tripadvisor dia namoaka vola $ 604M tamin'ny taona 2020, efa ho $ 1B latsaky ny vola azon'ny $ 2019B an'ny 1.56. Ity dia fidinan'ny 61% YoY tamin'ny taona 2019 ary efa ho 62% ny fihenan'ny $ 1.61B avo indrindra amin'ny 2018.
Ny vola miditra napetraka tamin'ny taona 2020 no ambany indrindra hatramin'ny 2010 raha vao 10 taona monja ilay orinasa.
Fepetra fanapahana vidin'ny vidin'ny Tripadvisor - Efa ho 40% ny isan'ireo mpampiasa ary mihoatra ny 50% ny fandaniana
Ny Tripadvisor dia nametraka fepetra fandaniam-bola marobe manoloana ny areti-mandringana. Ny fandaniana amin'ny varotra sy ny varotra dia nidina hatramin'ny $ 316M tamin'ny taona 2020, ny ambaratonga ambany indrindra hatramin'ny 2012 ary 53% ambany noho ny tarehimarika 2019 an'ny $ 672M. Ny orinasa koa dia nandray ny fanapahan-kevitra sarotra hanamaivanana ny isan'ny mpiasa ao aminy, herintaona monja taorian'ny fampiasam-bola amin'ny asany.
Tamin'ny taona 2019, ny Tripadvisor dia nampitombo ny mpiasa 25% nahatratra mpiasa kely latsaka ny 4200. Natomboka tamin'ny taona 2020 ny fihenan'ny mpiasa, ary ny isan'ny mpiasa dia nihena 38.1% ka latsaka ny 2600. Ity isa ity no isa ambany indrindra hatramin'ny 2013 ary 23% latsaka noho ny isa 2018, ny taona talohan'ny Tripadvisor nanitatra ny asany.
Na eo aza izany fihenana izany dia mbola namoaka fatiantoka marobe mitentina 289 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2020 ny Tripadvisor.
Tatitra momba ny valizy very: kitapo 853,000 nohafohezin'ny kaompaniam-pitanterana amerikana tamin'ny taona 2020